Ngaba uyondla iZimbo ezi-3 zokuFunda? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 18, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
IiSayithi, ii-imeyile kunye neeblogi zibonakala ngokwendalo kwaye zisebenzisana kakhulu nomsebenzisi. Oko kukuthi… ungabona (okubonwayo) kwaye unganxibelelana (isinyithi) nomxholo. Zeziphi iisayithi ezininzi, kubandakanya Martech Zone, ayenzi kakuhle kukutya abaphulaphuli, nangona kunjalo.
Iindlela ezi-3 zokuFunda
Visual - uninzi lwabafundi luyabonwa. Bayakuthanda ukufunda kwaye ngakumbi bafunde xa lo mxholo uxhaswa ziitshathi kunye nemifanekiso.
Uphicotho -Kukho icandelo labemi elingenakufunda ngokubonakalayo kuphela ... kufuneka benze njalo ukuzwa ulwazi ukuze uyiqonde. Ithoni yelizwi kunye nokunyusa kubaluleke kakhulu.
Ukunyusa ubugcisa - abanye abantu abafundi ngokufunda okanye ukuva… bafunda ngokunxibelelana. Nangona ibhlog ilwenza olu hlobo lonxibelelwano, kukho amathuba ongezelelweyo okuqinisa ngee-polls, amaphepha emibuzo, ii-slideshows kunye nolunye usetyenziso.
Njengenkampani, kubalulekile ukuba iinzame zakho zokuthengisa kwi-Intanethi ifidi ezi ndlela zintathu zokufunda. Ukuphindaphindwa komxholo akuyi kumondla wonke umfundi ophononongo- kufuneka ubabonelele ngeendlela zokuba bamamele umxholo ukuze uwuqonde ngokupheleleyo. Kungenxa yesi sizathu le nto uninzi lwamakhasi e-cheesy efika kwiwebhu kubandakanya ividiyo, isicatshulwa kunye nolunye uhlobo lonxibelelwano.
Abazami nje ukugubungela zonke iziseko zabo… bazilungiselele umfundi ophononongayo otsibela ngqo kwividiyo okanye umfundi we-kinesthetic otsiba ngqo kunxibelelwano.
Kungenxa yoko le nto siye saqhubeka nokwandisa ukufikelela kwe Martech Zone yethu uonomathotholo, yethu Iividiyo zeYouTube, yethu mobile izicelo, kunye neyethu ngezantsi.
IiTweets zoNgcono zoDumo zilapha!
Sep 18, 2009 ngo-6: 44 PM
UDoug - iposti eyothusayo. Ndigqibile ikhosi yokuFundisa ukuThengisa xa yayiqala ukwaziswa kwaye uBrian Clark ngokuqinisekileyo wayigrumba le entloko-kodwa njengesixhobo sokufunda nge-eLearning.
Ndiphumelele kakhulu ngee-podcast ezimanyelwayo kodwa ngoku, ndenza ividiyo kwaye ndahlula-hlula umsindo njengoko ubucebisile. Ayisiyoncedo kuphela kumsebenzisi wokugqibela-kodwa uneemveliso ezimbini ezinokubakho onokuzithengisa!
Sep 18, 2009 ngo-11: 24 PM
Enkosi Jason! Ndifundile malunga nezindlela ezi-3 zokufunda ngekhosi yokuthengisa endiyithathayo ngoku!